Zonke cishe sibabone izithombe stereo emehlweni nge ngemuva izincwadi esikoleni. Othile Ngaphenduka ukuze ngibone isithombe ngakuthathu kufihlwe kubo ngokushesha, umuntu akakwazanga ukubona isithombe ngakuthathu, kungakhathaliseki wazama kanjani kanzima. Eqinisweni, 1% kuphela abantu emhlabeni akakwazi cabanga ngomfanekiso ngakuthathu. Konke okunye nje udinga ukuqeqeshwa iso.
Yiziphi izithombe stereo emehlweni?
isithombe-Stereo, noma ngenye indlela SIRDS (Single Image okungahleliwe Dot Stereograms), lalivela at kwalapho wesayensi eziningana. Lokhu kungenxa kakhulu, yokukhanya, Psychology, izitho zomzimba, kanye nabanye.
Abantu abaningi ukubona izinto ezizungezile ngamehlo amabili. Babukeka ngeso ngalunye ngokuhlukile, bese ubuchopho kwenza izithombe ezimbili esweni ngalinye, isithombe esisodwa ngakuthathu.
Uma sicabange ukuthi amehlo ethu ezishisa kakhulu zikhipha izinhlayiyana imishayo ezimbili, ngesikhathi lapho siya ndawana-thile sibheka iphuzu lapho uqondiswa umbono wethu, imishayo esiphambanweni. I kude into sibheka, le-acute ngaphezulu engela engu- imishayo. Kuye engela lapho iso iqondiswa, ubuchopho Kunika ibanga into.
Kwenzekani uma sibheka isithombe nge ngokuphinda izibalo okuyinto cishe izakhamuzi zaseBosnia zifana phakathi kwabo? Ubuchopho kuleli cala, sihlanganise engele akuzona efanele, futhi umuntu uzobona ukuthi yini ngempela esithombeni kungekho. ezithakazelisayo kakhulu ukuthi umfanekiso non-akukho ngeke flat futhi ngakuthathu.
Sihlaleleni ubuka izithombe stereo emehlweni?
It kuvela ukuthi thrall ka-stereo - akusiwona nje ukuzijabulisa. Lo msebenzi, ngokuvumelana bamehlo, kuyazuzisa umbono wethu.
Indawo esweni ngcono. Lokhu kungenxa voltage kushintshana, bese imisipha iso. Ngakwelinye ihlangothi, lezi zenzo ngcono umbono, kwenze omnandi ngaphezulu.
kwegazi imisipha iso buyathuthuka. Kuvikela amehlo akho kusukela ongaphakeme noma ukunyuka komfutho wegazi.
Ukuqeqesha umsebenzi ubuchopho. Kwandisa okuhlushwa ukuqapha. Ukukala kwandisa ukusabela ingqondo.
Batfutfukise emakhono Umbono stereoscopic.
Kubalulekile eshaywa njalo, ubuka izithombe stereo emehlweni. Inxanxathela stereo isithombe, okuyinto-imbewu kuthatha isikhathi eside ukuba abangele nkinga ye-cornea esweni, okungaholela, yenza ububomvu, kubangela ubuhlungu emehlweni. Lapho umuntu ° ng, iziteshi wacasuka izinyembezi, asenze iso, futhi omiswe cornea ayenzeki.
Ngokwe ngenhla, singaphetha ngokuthi izithombe ezinkulu stereo emehlweni ukuqeqeshwa esikrinini ngokugcwele, mancane wusizo umbono kunosayizi evamile ye-stereo isithombe.
Buhle Umbono stereoscopic
Ukuze sisinde kule Ukugunyaza Nokubukeza Okusatshalaliswe Yiwebhu wanikezwa ubunjalo iqoqo zonke izindlela. Le ndlela yokucabanga, inkumbulo, umcabango, futhi Umbono stereoscopic. Lo mbono ivumela umuntu ukulinganisa ngokunembile ibanga tintfo ezizungezile, ukucacisa ukuma ivolumu bento sise ibanga elithileko kusuka kithi.
Umbono stereoscopic kubaluleke kakhulu ukuba abantu nasemikhakheni efana basketball, ibhola, umshayeli, umklami, udokotela ohlinzayo, umshayeli, udokotela wamazinyo, wezakhiwo, kanye nabanye abaningi.
Ngenxa yenqwaba umbono, singayeka kalula uhala enalitini, ukubamba ibhola, uthele ingilazi yamanzi, ukushayela imoto, uzoshiya phezu izithiyo, nyakazisa izandla nabantu obajwayele ubuka izithombe stereoscopic.
Indlela esiphatha ngayo stereo
Zibonwa isithombe ephepheni kunokuba esikrinini sekhompyutha. Ngakho-ke, uma kungenzeka - uzitholele isithombe. Sebenzisa iphrinta umbala ayidingekile. Libhalwe iphrinta omnyama nomhlophe, isithombe kufanele kubhekwe kanye umbala.
Manje podnesom isithombe ekhaleni, bheka ukufiphala, sengathi kude, focus yesithombe ngakho owawuphezu.
Slow Shelelisela umdwebo wakho kusukela ekhaleni. Ngesikhathi esifanayo, qhubeka ungabheki lesitfombe, kanye nebanga. Uma elahlekile futhi ukuphazanyiswa - ukuqala kabusha.
Umfanekiso uyotholakala azungeze buqamama ingalo izimisele endololwaneni.
Lapho ongaphambili, uzobona isithombe esicacile, nakho konke okunye, uyawuba njengemfundzisi isizinda - umphumela stereo abayifunayo.
Into ebaluleke kakhulu kule wokubuka stereoscopic - ikhono qhubeka focus yesithombe isikhathi eside.
Bonisa ukuqeqesha omningi
Ukuzivocavoca №1 nge esibukweni.
Kumelwe ume phambi kwesibuko bese ubheka ukuhumusha yanjalo ngesikhathi kuveza wakhe, khona-ke ebusweni esibukweni. Phinda imizuzu 2-3.
Ingqikithi lesi sivivinyo zimi kanje: kuveza yakho - yindawo lapho udinga ukugxila amehlo akho lapho ebukela izithombe stereoscopic, kanye ebusweni esibukweni - ngokwako stereo, indawo lapho isithombe volumetric.
Sondeza stereo isithombe ukuze amehlo eduze ngangokunokwenzeka. Linda kuze kube yilapho amehlo defocused uqobo.
Slow Shelelisela isithombe sakho lomuntu kuze isithombe ezintathu-ntathu.
Umuntu abavamile njalo esetshenziswa ukuze ubuke nge kokubili amehlo ngephuzu elilodwa. Kulesi umsebenzi, kufanele sizame ukubona ngeso ngamunye ezintweni ezahlukene ku stereorisunke. Ukwenza lo umsebenzi kuthatha umkhuba, kodwa lizogcina ukufunda konke comers.
Ukubheka iso stereokartinok - hhayi kuphela indlela nijabula, kodwa futhi ithuba ukuthuthukisa umbono wabo, ukuthuthukisa icacile futhi kujwayeleke ingcindezi esweni. Ukuze lo msebenzi wakukhipha umusa, khumbula blink njalo hydration efanele kwamehlo akho. Futhi cabanga iphepha, iphrintwe isithombe, akubona yini abantu abaphatha esikrinini.
Isixazululo for lens "Renu" (ReNu): incazelo, ukubuyekezwa
Ziyini izimbangela short-okwesa-?
Xperia Z1 Compact - ekuhlaziyeni imodeli, izibuyekezo zamakhasimende nochwepheshe
Ubomvu kusukela ekhaleni, noma yini sinusitis
Intela Imoto e Bashkiria. Izinga lentela imoto ngo-2014
I-hydrogen. Umlando kokudaliweyo esinamandla
Ukubamba ngoba carp. Carp phezu Element. Ukudoba ngoba carp
Kungani iphupho ichibi lokubhukuda?
Yini inyoni lihlabelela ebusuku futhi kungani?